प्रचण्डलाई नसोचेको झड्का, १६ सांसद एमालेमा प्रवेश ! को-को ?[सूची सहित] – Pahilo Update
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका १६ सांसदले पार्टी छाडेका छन् । संघीय र प्रदेशसभामा गरेर १६ सांसदले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयलाई माओवादीले सांसद पदबाट मुक्त गराएको छ भने कतिपय हुने क्रममा रहेका छन् ।
तत्कालिन गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र पछि नेकपा)बाट चुनाव लडेर जितेका उनिहरु नेकपाको अस्तित्व सकिएपछि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
माओवादीले प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेश–२ मा सवैभन्दा धेरे सांसद गुमाएको छ । त्यहा उसले तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र एकजना समानुपातिक सांसद गुमाएको छ ।
प्रदेश–२ बाट निर्वाचित सांसदहरु रामचन्द्र मण्डल धनुषा–१ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । बारा –३ (क) बाट निर्वाचित ज्वालाकुमारी साह र रौतहट– ३ (ख) बाट निर्वाचित कुन्दनप्रसाद कुशवाह पनि एमाले भएका छन् । बाराबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित मोहम्मद समिर पनि एमाले प्रवेश गरे ।
लुम्बिनीका दुई सांसद गुमाएको माओवादीले कर्णालीबाट दुई र प्रदेश १ वाट एक सांसद पद गुमाएको छ । एमाले प्रवेश गरेसँगै उनीहरु सवैलाई माओवादीले कारवाही गरिसकेको छ ।
लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थी एमाले प्रवेश गरेका कारण कारवाहीमा परेका छन् । गण्डकी र वागमती प्रदेशबाट मात्र माओवादीले आफ्ना सांसद जोगाएको छ ।